Al-Shabaab oo fudayd badan ku sheegay Madaxweyne Farmaajo…………….. – Kismaayo24 News Agency
Al-Shabaab oo fudayd badan ku sheegay Madaxweyne Farmaajo……………..
by admin 10th April 2017 10th April 2017 115
Kooxda Al-Shabaab ayaa jawaab adag ka bixisay go’aankii uu madaxweyne Farmaajo xaalada deg deg ah ku geliyay dalka, iyagoo sheegay in go’aankaas uu u fududeyn doono iney la dagaalamaan ciidamada DFS iyo kuwa Amisom.
Afhayeenka Kooxda AL-Shabaab Sh Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in Farmaajo uu yahay nin ka liita madaxdii hore sida Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif isla markaana ay kaga adkaan doonaan dagaalka.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Afhayeenka AlShabaab sheegay in Farmaajo uu madaxdii hore uga duwan yahay fudeyd “isagoo aan xataa labo bil joogin ayuu tuute soo qaatay oo uu dagaal iclaamiyay”ayuu yiri afhayeenka AlShabaab.
Afhayeenka Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay iney yaqaanaan sida looga guuleysto qofka fudud ayna sii wadayaan weerarada ay ku qaadayaan xarumaha dowlada iyo dagaalada tooska ah.
Hadalka kasoo baxay Al-Shabaab ayaa kusoo aadaya xili madaxweyne Farmaajo uu dhawaan ku dhawaaqay in dalka uu geliyay xaalad dagaal oo deg deg ah.
DEG DEG: Ciidamada amisom oo fal naxdin ah ka geestay isgooyska sanca iyo shacab careysan oo…..
Farmaajo oo kalsoonidii shacabka sii dhuminaya…..
Barlamanka Somalia oo meelmariyay sharci muhiim ah
admin 12th December 2015
War Hada: Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaliya oo Ku guuleystay Kursiga Seddexaad Aqalka Sare Puntland+Magaciisa